Cajiib: Mataano Madaw Iyo Caddaan Ah – Beegsonews-Wararka maanta
Home XOGAHA DUNIDA Cajiib: Mataano Madaw Iyo Caddaan Ah
Cajiib: Mataano Madaw Iyo Caddaan Ah
Laba gabdhood oo mataano ah oo dhalashadoodu kala horraysay hal daqiiqo oo kaliya, ayaa kala duwanaansho midabkooda la xidhiidha sababay in ay layaab ku noqdaan dunida, labadan gabdhood oo lagu kala magacaabo Kian iyo Remee ayaa midna madawdahay halka ta kalena ay ka cadahay.
Sida ay ku warrameen wakaaladaha wararka dunidu, labadan gabdhood ee mataanaha ah oo wadaagay uurkii hooyadood kana wada beermay, labo waalid oo caddaan ah ayaa haddana ta labada ta madow waxa ay leedahay timo madaw ah iyo weliba indho madaw halka ta kale ka leedahay timo iyo indho wada caddaan ah.
Labada waalid ee dhalay mataanahan oo ku nool magaalada New York ee dalka Maraykanka sheegay in ay mataanahoodii yihiin,aadna u jecel yihiin kuna faraxsanyihiin,laakiin ay dhibaato ka haysato su’aasha ay dadku ka weydiinayaan ee ku saabsan kala duwanaanta midabkooda.
13 sano ka hor ayay ahayd markii ay dhasheen labadan gabdhood ee mataanaha ahi, laakiin waxa muddo 8 sanadood ah si xawli ah isu soo tarayay kala duwanaanshaha midabkooda iyo muuqaalkooda.
Xaaladda noocan ah ayay dhakhaatiirtu ku sheegaan in ay tahay mid dhif iyo naadir ah oo 20 ee mataano ah ee dhashaba hal mid lagu arko, taasi oo kasoo raacda hidda sidayaal awoowayaashoodii iyo ayeeyoonkoodii hore kasoo raacda.
Previous articleCajiib: Rag Kabo La’ Oo Xaasaskooda Dab Kala Tallaaba
Next articleQaar Kamida Haweenkii Islaamka Ee Taariikhda Dunida Wax Kusoo Kordhiyay